Ciwaanka: FDA waxay ka shaqeysaa inay ka ilaaliso macaamiisha badeecada iftiiminta maqaarka ee OTC ee waxyeelada leh | FDA
Ciwaanka: FDA waxay ka shaqeysaa inay ka ilaaliso macaamiisha badeecada iftiiminta maqaarka ee OTC ee waxyeelada leh
[4/19/2022] FDA waxay u soo saartay warqado digniin ah 12 shirkadood oo iibinaya badeecada iftiiminta maqaarka oo ay ku jirto hydroquinone oo aan buuxin shuruudaha si sharci ah loogu iibiyo dawooyinka OTC. Waraaqaha digniinta waxay sharaxayaan in badeecadan iftiinka maqaarka ee OTC ee ay ku jiraan maadada daroogada firfircoon ee hydroquinone ay yihiin dawooyin aan la ansaxinin oo aan guud ahaan loo aqoonsan inay yihiin nabdoon iyo wax ku ool ah (ma ahan GRASE).
FDA waxay heshay warbixino ku saabsan falcelin halis ah oo ay ka mid yihiin finan maqaarka ah, bararka wejiga, iyo ochronosis (midab maqaarka) oo ka timaade isticmaalka badeecada iftiinka maqaarka oo ay ku jirto hydroquinone. FDA waxay kula talisaa macaamiisha inaysan isticmaalin badeecadaan sababtoo ah waxyeelada suurtagalka ah ee ay keeni karaan, oo ay ku jirto ochronosis oo laga yaabo inay abadan noqoto. Macaamiishu waa inay kala hadlaan xirfadahooda daryeelka caafimaadka waxa ku saabsan xulashooyinka daawaynta ee xaaladaha maqaarka qaarkood oo ay ku jiraan baraha da'da ama bar madow
FDA waxay uga digaysaa macaamiisha inaysan jirin wax FDA-ay ansixisay ama haddii kale si sharci ah loo suuqgeeyay OTC alaabta iftiiminta maqaarka. Qaar ka mid ah soosaarayaasha iyo qaybiyayaashu waxay mar hore ka saareen suuqa OTC badeecadooda iftiiminta maqaarka, FDA waxay qorshaynaysaa inay tallaabo ka qaaddo kuwa sii wada suuq-geynta waxyaabahan OTC ee khatarta ah iyo kuwa sharci darrada ah.
Hadda, Tri-Luma waa daawada kaliya ee FDA-ansixisay ee ka kooban hydroquinone. Tri-Luma waa badeeco dhakhtar soo qoray oo loo ansixiye daawaynta muddada-gaaban ee dhibco madow ee la xiriira melasma dhexdhexaad-ilaa- daran ee wejiga. Tri-Luma waa in la isticmaalo oo kaliya iyadoo ay hoos imaanayaan kormeerka xirfadlaha daryeelka caafimaadka ee shatiga haysta.
Marka lagu daro dadaalada jawaab celinta COVID-19, Gargaarka Coronavirus, Raysashada, iyo Sharciga Amniga Dhaqaalaha (Xeerka CARES) waxaa ka mid ahaa dib-u-habeyn muhiim ah oo casriyeeyay sida dawooyinka OTC loo habeeyo. Dib-u-habayntani waxay soo gebagabaysay heerka sharci ee badeecadaha leh maaddooyin firfircoon oo gaar ah ama shuruudo kale oo la sugayey qaab-dhismeedkii hore ee sharci-dejinta, oo ay ku jiraan dhammaystirka heerka badeecada iftiiminta maqaarka ee OTC. Natiijo ahaan, tan iyo markii la sameeyay sharciga CARES, badeecada iftiiminta maqaarka ee OTC oo ay ku jiraan hydroquinone ayaa loo arkaa inay yihiin dawooyin cusub oo si khaldan loo xayeeysiiye. Dhammaan badeecooyinka iftiiminta maqaarka ee OTC waxay u baahan yihiin codsi cusub oo FDA ay ansixisay ka hor inta aan si sharci ah loo suuqgeyn.
Iyada oo ay ugu wacan tahay Sharciga CARES, laga bilaabo Sebtember 23, 2020, soosaarayaasha iyo qaybiyaasha badeecada iftiinka maqaarka ee OTC ee aan lahayn ansixinta FDA waa inay ka saaraan badeecada suuqa. Waraaqaha digniinta ah ee FDA ay soo saartay maanta waa shirkadaha wali suuq gaynaya badeecada iftiiminta maqaarka ee OTC oo ay ku jiraan hydroquinone iyada oo aan FDA ansixinin codsi daawo cusub.
FDA waxay ka codsatay shirkadaha helaya waraaqaha digniinta inay qaadaan tallaabo deg deg ah oo lagu saxayo wixii xadgudub ah ee lagu qeexay waraaqaha digniinta oo ayna ugu jawaabaan FDA 15 maalmood gudahood wixii ay sameeyeen si ay wax uga qabtaan xadgudub kasta oo ayna uga hortagaan soo noq noqoshada.
FDA waxay qaadaysaa hab dhammaystiran si ay macaamiisha uga ilaaliso khatarta ka imanaysa badeecada iftiiminta maqaarka oo ay ku jiraan hydroquinone. Hay'addu waxay ogeysiineysaa shirkadaha ku taxan liistida dawooyinkan FDA, laakiin aan si firfircoon u qaybin, xaaladda sharciga ah ee hadda jirta ee daawooyinkaan si looga hortago shirkadaha inay u qaybiyaan badeecadan sharci darrada ah. FDA waxay sidoo kale ku daraysaa qaar ka mid ah soosaarayaasha badeecada iftiiminta maqaarka digniin soo dejineed si ay uga caawiso joojinta badeecadoda inay soo galaan Mareykanka Qaar badan oo ka mid ah walaacyada badbaadada FDA ee ku saabsan isticmaalka hydroquinone ee maqaarka iftiinka ee OTC waxay sidoo kale khuseeyaan isticmaalka hydroquinone ee badeecada qurxinta.
FDA waxay xasuusinaysaa soosaarayaasha iyo qaybiyayaasha inay tahay mas'uuliyadooda inay u hogaansamaan dhammaan shuruudaha sharciga federaalka iyo xeerarka FDA, iyo inay hubiyaan in dawooyinkoodu ay buuxiyeen heerarka federaalka ee badbaadada iyo waxtarka. Kuwa ku guuldareysta inay u hoggaansamaan sharciga ayaa waxaa talaabo ka qaadi FDA.
FDA waxay ku dhiirigelisaa xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyo macaamiisha inay ka warbixiyaan falcelinta xun ama dhibaatooyinka xaga tayada ee ay kala kulmeen isticmaalka badeecadaan barnaamijka Ka warbixinta Dhacdada Xun ee MedWatch ee FDA ee:
Dhameystirka iyo gudbinta warbixinta khadka tooska ah www.fda.gov/medwatch/report.htm; ama
Soo dejinta iyo buuxinta foomka, ka dibna ku gudbinta fakis1-800-FDA-0178.